Banyere Anyị - Duoduo International Development Co., Ltd.
Duoduo E hiwere International Development Co., Ltd. na 2013. Anyị bụ ọkachamara n'ichepụta na ikesa ụgbọ ibu dị iche iche, trolleys, ụgbọ ala ịzụ ahịa, ụgbọ ala ewepụghị, ụgbọ ala nwere ọtụtụ ebumnuche na usoro ndị ọzọ, ihe karịrị ụdị ngwaahịa 100. Ụlọ ọrụ na -emepụta ngwaahịa ọhụrụ iji na -egbo mkpa ahịa kwa afọ.
Anyị nwere ahịrị stamping, ahịrị ịgbado ọkụ, ahịrị ekwe, ahịrị ịkpụzi agịga, ahịrị ọgwụgwọ elu, ahịrị mgbakọ, ahịrị nnwale na ahịrị mmepụta ọkachamara ndị ọzọ ugbu a.
Anyị enwetala ntụkwasị obi na ihu ọma n'aka ọtụtụ ndị ahịa n'ihi ezi iguzosi ike n'ezi ihe, ọrụ ọkachamara na njikwa mma dị elu. Ebumnuche ọrụ anyị bụ: imewe na imepụta ihe dị elu, ọdịdị mara mma, ịdị mma kwụsiri ike na ịdịte aka. Ugbu a, na Yiwu International Trade City, isi obodo ụwa, anyị nwere ụlọ ahịa anyị ozugbo, ahịa wee nyela anyị aha "onye na -ebubata isi". Anyị nwere ike R&D nọọrọ onwe ya na ọkwa ọrụ dị mma, nabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ịkpa nkata azụmahịa.
Anyị nwere nganga maka ịdị mma na ịdịgide na ngwaahịa na ọrụ enyere ndị ahịa anyị na anyị bịara ebe a iji mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa ịntanetị gị dị mma. Na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị, enwere nnukwu nhọrọ. Site na ahụmịhe ọtụtụ afọ na mmekọrịta dị n'etiti onye na -eweta ihe nrụpụta na ndị ahịa anyị, anyị na -egosi ọrụ anyị mgbe niile ka obi wee dị gị mma mgbe ịzụrụ ebe a.
A na -eji iwu kachasị elebara iwu niile anya iji gboo mkpa. Anyị nwere ekele maka mkpa ịzụrụ gị, ọ bụ ya mere anyị ji ere naanị ngwaahịa ọhụrụ, na -emepeghị emepe, na -ejighị ya nke na -enye anyị iwu n'aka onye nrụpụta. Ndị ahịa anyị na -atụ anya, ha ga -enwetakwa, ngwaahịa dị elu mgbe ha na anyị na -enye iwu. Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa anyị ngwaahịa kwesịrị ekwesị na ọnụahịa kwesịrị ekwesị, anapụta ya n'oge.
Anyị nwere ndị otu ọrụ ndị ahịa dị ike nke na -eleba anya n'usoro ahịa niile. Ndị otu ahụ na -adị njikere mgbe niile ma nwee obi ụtọ inyere gị aka, dozie nlọghachi gị ma dochie ya, ma gee mkpesa gị ntị. Ndị otu ọrụ anyị na -arapara na ntuziaka ya.